မိုးဟေကို | Myanmar Model
မိုးဟေကို aEG&moDzuf&Sif&dI;rS yHkawGyg/
Like this:Like Loading... 102 comments so far ry
February 5, 2008	speechless collection..
February 11, 2008	good luukss,, N Its opslut vavavum, hehe, haccha
May 2, 2008	..da gae ko update lote htar tar pae..
June 7, 2008	A yineayine gyi mite par tal byar
June 7, 2008	Fuck love
June 11, 2008	moe hay ko koayan like tal…………
dar bay ma` ku lo boy tway na` see lite ya dot kabyar like da` moe hay ko ka bal lo girl myo la`.
moe hay ko bal lo ba` phyit nay phyit nay kabyar ka dot moe hay ko ya` movie tway ko kyi done ba`.
moe hay ko ko chit la` chit tal.ok?
moe hay ko de htet aung myin bar say….?
June 19, 2008	moe hay ko ko chit tal
July 4, 2008	ဒါနိုင်ငံခြားမင်းသမီလား… ဟင်..?
August 23, 2008	good par tai
arr lone lal like tai
i lal like tai
bar lal tp thi fu
September 2, 2008	how may people say what she does what she did what she will do,she is the most shinning star in myanmar ,we muat accept it.
September 2, 2008	the success she did is not lying it si true ,really
so most of her audience love her
September 25, 2008	မန္တလေး သူလိုမပြောပါနဲ့ဗျာ ကျွန်တော်တိုမန္တလေး သိက္ခာကျလိုနော်
October 3, 2008	လိုးရှင်းလိမ်းရင် အကြောင်းကြားပေးပါဦး
October 4, 2008	very good style girl.I love her style and than keep in my dream.
October 17, 2008	Hi! how are you?look like to see you.lovely.
October 26, 2008	you are so cute because you are very sexy.
October 30, 2008	I donnot like is your style.after your post is never get my heart.If your stupid girl.I think love and sex is not same.Do you know?
November 2, 2008	To
MIN KO CHA CHIN TAL
November 11, 2008	come to my house last night
November 11, 2008	်ငါ လိုးခြင်တယ်
November 12, 2008	moe hay koe is very cute , however she is , i liek her soo much🙂 my favourite actress
si thu tun naung
November 12, 2008	moe hay ko is i love you
November 18, 2008	လိုးချင်တယ်ကွာ…အရမ်းအရမ်းဘဲ
December 4, 2008	လိမ်လိမ်မာမာနေပါကွာ . . . ဘဝ ခရီးက တိုတိုလေး . . .
December 6, 2008	I want to fuck her ass
December 27, 2008	Mo Hay Ko lotion advertise pe yin condom advertise par ohn lar
January 5, 2009	မိုးဟေကိုလိုးရရင်တော်တော်ကောင်းမှာပဲနော်…. ဒါပေမဲ့သူရောင်းနေလို့အပေါက်တော့တော်တော့ကျယ်မှာပါပဲနော်…..
January 6, 2009	moe hay ko is the sexiest myanmar actress..
moe hay ko kaayan ko sexy phyit loon par tal
moe hay ko bal thu tway nae sex lote pi pi lal ma teet boo. teet chin tal.
February 9, 2009	Hello ,Moe Hay Ko you are myanmar citizen.you should obey to Myanmar curture.if you not obey to myanmar curture ,i want to sleep with you about one month. your father and mother are Myanmar citizen.you mach care of your future.also you should not say you are Mandalay citizen.Mandalay man and women are very honest and they care to Mandalay regulation.i anxious about your future.i want to fuck you
kyaw kyaw oo[Mandalay,Myanmar]
March 5, 2009	တကယ် မိုက်တယ်
March 12, 2009	Iloveyou
April 10, 2009	သူများတွေဘာပဲပြောပြော လူတစ်ယောက်ကို အကောင်းဘက်ကပဲမြင်တတ်ပါတယ်.. ကိုယ်မလုပ်နိူင်တဲ့ အရာတစ်ခုကိုသူလုပ်နိူင်တယ်လေ..ဟုတ်တယ်မလား..
April 23, 2009	အင်း ဟုတ်တယ် မိုက်တယ်ဗျာ အဲဒီ မမက
June 28, 2009	she is so serious
Mg Lay Nge
June 29, 2009	ွှအလှဘဲ ထိုင်ကြည်.ချင်တယ်၊
July 11, 2009	y r alon might tel dal pal mellt len alon hot lon tel…..
ုko moe aung
July 14, 2009	မိုးရင်
July 25, 2009	kaung par tal
July 28, 2009	မင်းလေးနဲ့ အတူတူ အိပ်ချင်တာဘဲသိတယ်….
August 11, 2009	မင်္ဂလာဦးည
August 19, 2009	ဘာတွေ ညာဘွေ တွေးမနေတော့ဘူးးးးးးးးးး
ဟင်းးးးး ဟင်းးးးးးးးးးးးးးးးး ဟင်းးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးး
September 24, 2009	moe hay ko yal nin ko ngar ah yam chit par tal but; nin ka sexy sam lunn daw lu twe ka pyaw sa yar phit dar pop aedsa gar twe ko ngar ma kham ng daw bue nin thi lar par pal phit phit nin har nga yae pal………………..
October 14, 2009	She is look like Ghost in the mid night dream ! ! !
November 2, 2009	လူဘ၀သက်တမ်းတစ်လျောက်လုံးအသက်ရှင်ချိန်အတွးမှမင်းဟာငါတွေသမျှအချောဆုံးပဲ
November 9, 2009	Pone Twae kaayan Mite tae
January 1, 2010	ပုံ ကောင်းကောင်းထည့် ကြပါဟ ငါလည်းကြည့် ချင်လို့ 
April 2, 2011	်all တွေ၇မလား
July 31, 2011	မိုးဟေကို
September 19, 2011	lotion kar ka taw taw pout tal na` tu tal
October 5, 2011	ခွေးမသားတွေနင်တို့အမေလဲမိန်းမ မဟုတ်ဘူးလား
April 5, 2012	yinyinnwe ကိုလိုးချင်တယ်နင်ဖင်ခံမလားငါ့လီးကြီးတယ်နော်နင်ဖင်ကြီးရင်တစ်ညလုံးချချင်တယ်ကြိုက်ရင်ဆက်သွယ်လိုက်နောက်မှစောက်ရမ်းကြီးမအော်နဲ့ပါးစပ်ကိုပါလိုးမှာ
April 13, 2012	လိုးရင်တောင်သူ့စောက်ဖုပ်ကို ကြည့်ပြီးလီးသနတယ်ကွာ
April 27, 2012	မမ နေ ကောင်းလား
May 8, 2012	သူများတွေမလုပ်နိုင်တာလုပ်တဲ့အတွက်လေးစားပါတယ်
May 26, 2012	မစင်တို့ ဖြင့် ဖြည့် တင်းထားသောစဉ့် အိုးကြီးကဲ့ သို့ အမှန်ပင်ဖြစ်သောကြောင့်နှစ်သက်ဖွယ်မရှိ (အသုဘ)ပင်ဖြစ်တော့ ၏။…….။
June 4, 2012	မိုးဟေကို ခင်ခွင့်ပေးပါနှော့
June 4, 2012	နေဘာပဲ ဖြစ်နေဖြစ်နေ ငါ အမြဲတမ်းရှိနေမယ် နှော့မိုးရဲ လုံခြုံမှုတွေ ငါဖြည့်ဆည်းပေးချင်တယ် လက်ခံပါ..ငါ တစ်ယောက်ထည်းပါပဲ။
July 16, 2012	ညီမအချင်ချင်ကိုချင်စာပါ
July 16, 2012	မင်းတိုကကောမြန်မာမဟုတ်ဘူးလား
July 19, 2012	မသူများတွေ ဘာပြောပြော စိတ်မညစ်နဲ့ နော် ၊ မကို မောင်က တကယ်လိုးချင်တာပါ ၊ မ ဖင်ခံတဲ့ ကားများများရိုက်နော် မခံတဲ့ ကားဆို မောင်က တော်တေ်ာ ကြိုက်တယ်၊ အပြင်မှာ မကို လိုးချင်တယ် ၊ခံမှာလား၊ လိုးမယ်နော် ၊အရင် တူန်းက မောင်လိုးတုန်းက အား…အား..လို့ အော်တာ ကို နားထဲ ကတောင်မထွက်ဘူး… မ မောင်လီးကို စုတ်ပေးတာတော်တေ်ာကောင်းတာပဲ နောက်လဲ စုတ်ပေူနော်
July 24, 2012	အော်……….
August 3, 2012	မမမိုးဟေကအရမ်းလှတာပဲနော် လှတောသား………..Myo gyi
August 13, 2012	မြန်မာလူမျိုးတွေတောင်တော်တော်ရိုင်းလာပြီပဲ
August 18, 2012	Hey very cool blog!! Man .. Excellent .. Wonderful .. I will bookmark your site and take the feeds also�I am satisfied to search outalot of useful info here in the put up, we need work out more techniques on this regard, thank you for sharing. . . . . .
August 19, 2012	ဘယ်သူတွေ ဘာဘဲပြောပြော
လူ့ဘဝ ဆိုတာ အချိန်ဇယားရှီတယ်
အသက် ၄၀ ကျော်သွားရင် ရွ လို့မကောင်းဘူး
August 22, 2012	ဒီလိုမိုက်ရိုင်းသူးတွေသတိထားvirus တွေနှင့် တိုက်ခိုက်ခံရမယ်မင့်တို့ရဲဖုန်းတွေကွန်ပြုတာတွေကိုသတိထား
September 25, 2012	မမဘယ်သူဘာပြောပြောအရမ်းချောတယ်….ထာဝရပရိတ်သတ်ပါ
October 14, 2012	ခေါင်းဆောင်မင်းသမီးတင်ရိုက်ချင်တယ် အောကားမှာ
October 19, 2012	ကောင်မလေးကလန်းတယ်
November 26, 2012	မိုးဟေကိုမင်းကိုကိုယ်အရမ်းကြိုက်တယ်ကွာမင်းကိုယ့်ကိုလက်ခံပေးမှာလားအှုရာရာတိုင်းကိုပေါံ့
January 16, 2013	မြန်မာ့ယဉ်ကျေးမှုအနုပညာထိန်းသိမ်းစောင့်ရှောက်ရေးအဖွဲ့ က တာဝန်ရှိသူတွေ
March 10, 2013	ဖါသယ်မငါပြောတုန်ကတော့အပျိုဆိုအခုတော့သူ့စောက်ပက်တောင်မှမရှိတော့ဘူးခွေးတောင်မလိုးတဲ့မိုးဟေကိုပါသူငယ်ချင်းတွေမှားမှာစိုးလိူ့ပါအခန့မသင့်ရင်လိးဖြတ်ခံနေရမယ်နော်တော်ကျာလူဖြစ်ရှုံးနေမှာစိုးလို့ပါgoodby.aboy.seeyougootneth
March 10, 2013	အိုးဟေကိုကတခါလိုးရင်ငွေ၅၀၀၀၀ကျပ်နဲ့ကြေထြ
April 1, 2013	လျှောက်မလုပ်ပါနဲ့ရှက်စရာကြီး၊ မရှက်တတ်ဘူးလား၊စောက်ရှက်ကိုမရှိဘူး ၊ဘယ်လိုမိန်းမလဲမသိဘူး။
April 1, 2013	မမ ကိုပဲအတင်းပြောမနေကြပါနဲ့
April 10, 2013	ခွေးသားတွေနင်တို့မှာအမတွေနှမတွေမရှိကြဘူးလားသူများကိုအတလောက်ပြောရတလားဟင်ငါဘဲသူ့ကိုလိုးမယ်နင်တို့တွေတော်တော့ ဟီး…………………………………………………….ဟီး…………………..
June 7, 2013	လိုးချင်တယ်
July 4, 2013	ကောင်းတာတွေတော့မပြောဘူး
September 17, 2013	သိပ်ချစ်တယ်
September 17, 2013	မင်းကြည့်ဖို့webပါ များများကြည့်နိုင်ပါစေ
September 30, 2013	အရမ်းလှတယ်
October 30, 2013	ဒီထက်လန်းအောင် ချွတ်ရိုက်ခိုင်းပေးပါ
December 5, 2013	အရမ်းသဘောကျတယ်
January 19, 2014	ု
February 20, 2014	အရမ်းကြိုက်တယ်၊များများတင်
March 14, 2014	မြန်မာမိန်းကများ အလှအပနဲ့အရှက်တရားဆိုတာသူတို့အတွက်ဟာသတစ်ခုလို့ထင်နေရော့သလား?မလုံမခြုံတွေဝတ် ဟိုပေါ်ဒီပေါ်တွေနဲ့လမ်းလျှောက်ပြပြုသူကမရှက်မြင်ရသူရှက်၏ ဒါလားမြန်မာ ယဉ်ကျေးမှုဆိုတာဘာမှန်းမသိတဲ့ အမျိုးသမီးတွေအမေပေးတဲ့ လယ်တစ်ကွပ်နဲ့အရှက်မရှိတဲ့သရက်စိတွေ အနောက်တိုင်းကမကောင်းတာတွေကိုအတု ယူ အတတ်ကောင်းတွေတတ် ဒီခေတ်မှာ သူ့ကိုယ်သူများ အပျိုစင်လေးပါတဲ့ ပြောပါးစပ်ကမရှက်ပဲပြောထွက်တာအံ့ပါရဲ့
June 14, 2014	အရမ်းလှတယ်
July 5, 2014	မမမောင်လေးပိုက်ပိုက်စုလိုက်အုံးမယ်နော်ပြီမှလာခဲ့မယ်ဆက်ဆက်စောင့်နေနော်
August 24, 2014	အင်း မိုးဟေက မဆင်ခြင်
August 31, 2014	မိုက်ရိုင်းတဲ့ကောင်တွေမိုးဟေကိုနေရာမှာမင်းတို့အမတွေအမေနှမတွေဆိုအဲ့လိုပြောနှိုင်ကျလားနှမချင်းကိုယ်
September 6, 2014	မိုက်တယ်လို့ပြောရင်ယုံမှာလားးး ဒီထက် မိုက်တဲ့ပုံတင်စမ်းပါဗျာ
September 14, 2014	လေးစားပါတယ်
September 16, 2014	မင်္ဂံလာပါ မမ မိုးဟေကို
မမရဲ့ comment တွေကိုဖတ်ရတော့ စိတ်မကောင်း
မမ လူတွေအပေါ်မှာ နားလည်ပေးနိူင်ပါစေ
September 16, 2014	လူဆိုရင် ကိုယ်ချင်းစာစိတ်ရှိရတယ်ကွ
မင်းတို့အဖေ အမေ ကိုယ်စားရှက်မိတယ်
December 2, 2014	Aww Ma Moe Kubarlook Naybarlay,.!
December 4, 2014	Aww Thukochithtoe Thukha Pyichitmarlar,.!
December 10, 2014	INOVEYOU
January 29, 2015	Ma Moe Nay Know Barlar,..
April 21, 2015	မိုးဟေကိုအရမ်းလှတယ်
May 25, 2015	မိုးဟေကို ကိုးရီးယားမှာ ဆုသွားယူမယ်ဆို ဘာဆုတွေရခဲ့ပါလည်း ။
August 17, 2015	hi hello Nayknow barlar ,..